Ciise Cabdullaahi | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waa waxyaabo ku jira dheecaannada jirka bani’aadanka, electrolytes-ka waa waxyaabo macdan ah oo laga helo dheecaannada jirka sida dhiigga, kaadida, iyo dhammaan dheecaannada kale ee ku jira jirka bani’aadanka. Dheecaannada ku jira jirka bani’aadanka waxay jirka uga jiraan labo qaab oo kala ah kuwa ku jira unuga banaankiisa iyo kuwa ku jira unuga dhexdiisa ama gudaha unuga, macdanta ku jirta jirka bani’aadanka waxa kamid ah sodium, calcium, magnesium, potassium, chloride, iyo macdan kale oo fara badan. Macdanta ku jirta dheecaanka jirka meelaha ay ku kala jiraan waa ku kala badan yihiin, marka loo fiiryo unugyada jirka, tusaale unuga gudahiisa waxa …
Waa nooc ka mid ah dheecaannada ku jira jirka bani’aadanka waa dheecaan dareere ah oo ku jira inta u dhexeeysa sambabada iyo xabadka. Sambabada iyo xabadka waxa ku dahaaran xuub weyn oo qafiif ah oo loo yaqaano pleural membrane. Pleural membrane-ka waa xuub weyn oo ka hooseeya xabbadka kasoo daboola sambabada, wuxuu ka kooban yahay qaab kiish oo kale u samaysan waxaana ku jira dheecaano, dheecaankaas waxay xuubka ka caawiyaan ilaalinta xubnaha in ay is xoqaan. Dheecaankaan mararka qaar aad ayuu ugu badtaa sambabada taasoo inta badan keenta kansarka ku dhaca sambabada iyo naasaha waxa kaloo keeni kara wadnaha oo …
Waa nooc ka mid ah dheecaannada ku jira jirka bani’aadanka waa dheecaan dareere ah oo ku jira ubucda caloosha (abdominal cavity) wuxuu ka qayb qaadtaa in ay is xoqaan xubnaha ku jira ubucda caloosha, ubucda caloosha waxa ku dahaaran xuub loo yaqaano peritoneal membranes waa xuub weyn oo aad u jilicsan oo ku dahaaran xubnaha ku jira ubucda caloosha. Dheecaankaan marka la qiyaaso inta ku jiri karta jirka caadi ahaan ubucda caloosha wuxu gaari karaa 5 ml ilaa iyo 20 ml, laakiin marka loo fiiriyo dumarka waa ku kala duwan yihiin qaarkood inta aan soo sheegnay waa ka badan karaa …
Candhuufta waa nooc ka mid ah dheecaannada ku jira jirka kuwooda ugu muhiimsan sababtoo ah dhoor shaqo oo muhiim ah ayey u qabtaan jirka bani’aadanka, dheecaankaan guud ahaan wuxu ka kooban yahay 98% biyo halka inta kale ee soo hartay ka kooban yahay waxyaabo isugu jira sida electrolytes, glycoprotein, enzymes (amylase) iyo waxyaabo ka hortaga jeermiska cuntada soo raaca. Soo saarida candhuufta waxa ka qayb qaata qanjirka loo yaqaano salivary glands oo ku yaala afka, seddax nooc ayaa jirta mid ku yaala daanka korkiisa oo loo yaqaano submandibular, iyo mid ku yaala carabka hoostiisa oo loo yaaqaano sublingual gland iyo …
Dhididka waa dheecaan biyo ah oo ka soo qulqula qanjirada u xilsaaran dhidid soo saarka jirka, dhididka wuxuu badanaaba ka dhashaa wasaq iska saarka jirka gaar ahaan hawo aan midab lahayn iyo cusbo isku tagta waxaa kale uu koontoroolaa heer kulka jirka. Dhididka ka soo hoos baxa maqaarka jirka waxay awood u leeyihiin in ay hab dhiska jirka qabowjiyaan sidaa daraadeed haddii heer kulka jirka uu kor u kaco waxaa siyaada dhididka ka soo baxa jirka, waxa kale oo dhididka ka soo baxa jirka kor u qaada xaalladaha sida xanuunka, lalabada, iyo walwalka, cabsida, waxa hoos u dhiga qabowga, shubanka, …
Marwalba waxa loo baahan yahay qof xirfad u leh qaadista dheecaankaan sababtoo ah qof aan xirfad u lahayn ma samayn karo baaritaankaan. Sawirkaan wuxuu ku muujinaa sida dheecaankaan looga qaado isgalka lafaha. Dheecaankaan marka la rabo in la qaado waxa la isticmaalaa cirbad af-dheer leh oo loogu talagalay in la dhex-geliyo meelaha isgalka ah ama meesha la-rabo in laga qaado dheecaankaan sida sawirka kore aad ka araktaan. Bukaanka marka laga qaadaayo dheecaankaan waxa wanaagsan in dareenka laga dilo meesha la rabo in laga qaado dheecaanka si uusan bukaanka u dareemin xanuun inta uu socodo baaritaanka. Caadi ahaan inta ku jiri …
Waa dheecaan dareere ah oo adag oo aan lahayn midab kasoo ah mid ku jira dhammaan isgalka lafaha wuxuu caawiyaa dhaq-dhaqaaqa iyo is xoqa lafaha. Dheecaankaan ku jira isgalka lafaha waxa ku dahaaran nooc ka mid ah carjawda jilicsan (smooth articular cartilage) kaasoo kala saara gododka uu ku jiro dheecaankaan loo yaqaano synovial fluids. Dheecaannada jirka iyo baaritaankooda Isgalka (joints) waxa ku hareerysan dhex-diisa dheecaan, dheecaankaas waxa u dhexeeya xuub loo yaqaano synovial membrane. Synovial membrane-ka waa xuub sal u ah dhammaan isgalka lafaha kaas soo u samaysan qaab kiish oo kale wuxuu masuul ka yahay in uu soo …
Marka aan rabno inaan ogaano da’da ilmaha ku jira caloosha hooyada waxa la baaraa oo laga ogaadaa creatinin-ta ku jirta dheecaanka amniotic fluid-ka waa xilliga hooyada uurkeeda gaaro 36 isbuuc waa bilaha ugu dambeeya ee uurka. Creatinine-ta ku jirta dheecaankaan amniotic fluid-ka cadadkiisa ama tiradiisa wuxuu gaaraa 1.5 ilaa iyo 2.0 mg/dl Dheecaannada jirka iyo baaritaankooda haddii uu ka siyaado 2.0 mg/dl ilmahaas waxay ka badan yihiin 36 isbuuc, macnaha sagaal bilood ayuu ka badan yahay. Waxa jira baaritaano kale oo lagu ogaado caafimaad qabka ilamaha calshooda ku jira sida qalabka loo yaqaano amnioscopy, amnioscopy waa qalab lagu baaro …
Waa nooc ka mid ah dheecaannada ku jira dumarka gaar ahaan marka ay uur leedahay hooyada, dheecaankaan wuxuu gaar u yahay dumarka uur ka leh, dheecaankaan wuxuu ku jiraa inta u dhexeeysa uur jiifta iyo xuubabka daboola, xuubka daboola waxa loo yaqaanaa amniotic cavity. Dheecaankaan wuxuu ka kooban yahay 98% biyo halka 2% uu ka kooban yahay waxyaabo solid ah sida creatinine, urea, uric acid, protein, glucose, hormone, enzymes, electrolytes iyo antibody, antibody wuxuu difaac u yahay cunuga ku jira caloosha hooyada. Caadi ahaan inta laga rabo dheecaankaan in uu ku jiro uurka hooyada waa 600 ilaa iyo 800ml, …
Marka la rabo in la ogaado guud ahaan borootiinka ku jira jirka waxa muhiim ah in markasta bukaanka laga wareysto xaalladiisa inta aan loo samaynin baaritaanka waxyaabaha bukaanka laga rabo waxa ka mid ah in uusan wax soo cunnin sidoo kale in uu iska illaaliyo daawooyinka qaar sida daawooyinka ka samaysan hoormoonada iyo wixii la mid ah. Marka hore waxaa soo diyaarsanee qalabka aad u baahan tahay sida. Semi-automatic analyzer waa qalabka lagu baaro dheecaannada jirka ku jirka. Centrifuge: waa qalab lagu kala dejiyo wax walbo oo dareera ah sida dhiigga iyo kaadida oo kale. Plain tubes: waa dhalo …